डेल्टाक्रोन: कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट कि प्रयोगशालाको त्रुटि? :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
डेल्टाक्रोन: कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट कि प्रयोगशालाको त्रुटि?
के ‘डेल्टाक्रोन’ वास्तविक भेरियन्ट हो?
स्वास्थ्यखबर सोमबार, माघ ३, २०७८, ०९:२३:००
तस्बिर सौजन्य: इजी२४न्यूज
काठमाडौं– यति बेला विश्वभर कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर सुरु भइसकेको छ। कतिपय देशमा संक्रमितको संख्या उच्च विन्दुतिर पुगेको छ भने कतिपयमा तीव्र दरमा बढिरहेको छ। केही महिनाअघि मात्र देखिएको ‘ओमिक्रोन’ भेरियन्टका कारण विश्वमा तेस्रो लहर आएको हो।
यसअघि नेपाललगायत देशमा दोस्रो लहर आउँदा ‘डेल्टा’ भेरियन्टका संक्रमितले अस्पताल भरिएका थिए। तर, ओमिक्रोनलाई डेल्टा जति खतरनाक भने मानिएको छैन। डेल्टा र ओमिक्रोन भेरियन्टको म्युटेसन भयो भने के होला त?
हुन त यस्तो कुनै भेरियन्ट बनेको विशेषज्ञ वा चिकित्सकले प्रमाणित गरेका छैनन्। न त विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले नै यस्तो भेरियन्टको संभावनाबारे आधिकारिक जानकारी दिएको छ। तर, यसरी म्युटेसन भएर ‘डेल्टाक्रोन’ बनेको आशंका भने गर्न थालिएको छ।
के हो कोरोनाको ‘डेल्टाक्रोन’ भेरियन्ट?
साइप्रसस्थित एक शोधकर्ताका अनुसार डेल्टाक्रोन भेरियन्ट कोरोना भाइरसको एउटा यस्तो स्वरुप हो, जुन डेल्टा र ओमिक्रोन मिलेर बनेको छ। यो स्ट्रेनलाई हाल ‘डेल्टाक्रोन’ नाम दिइएको छ। तर, यो डब्लूएचओले दिएको आधिकारिक नाम भने होइन। नयाँ भेरियन्टको नाम डब्लूएचओले दिने गरेको छ।
गत जनवरी ७ मा साइप्रसका वैज्ञानिकहरूले यो भेरियन्टलाई पहिलो पटक पुष्टि गरेका थिए। तर, डब्लूएचओले यसलाई पुष्टि भने गरेको भने छैन।
साइप्रस विश्वविद्यालयमा जैविक विज्ञानका प्राध्यापक रहेका वैज्ञानिक डा. लियोनडिओस कोस्त्रिकिसले नेतृत्व गरेको वैज्ञानिकहरूको टोलीले पहिलो पटक यो भेरियन्टबारे थाहा पाएको थियो। उनीहरुका अनुसार कोराना भाइरसको यो स्वरुपमा डेल्टा भेरियन्टको जस्तो जिनोम र ओमिक्रोनको जस्तो विशेषता पाइएको थियो। उनीहरुका अनुसार साइप्रसमा कुल २५ जनामा यस्तो भेरियन्टको संक्रमण पाइएको छ। तीमध्ये केही अस्पताल भर्ना भएका थिए भने केही समुदायमा थिए।
विश्वभर अहिले ओमिक्रोन सबैभन्दा तीव्र फैलिरहेको भेरियन्ट हो भने डेल्टा अघिल्लो वर्षको मार्च अप्रिलमा फैलिएको थियो। ओमिक्रोनलाई अहिलेसम्मको संक्रामक भेरियन्ट मानिएको छ। त्यस्तै डेल्टालाई हालसम्मकै घातक भेरियन्ट मानिन्छ। यस्तोमा यी दुई भेरियन्टको म्युटेसन भए कस्तो स्वरुपमा र कति खतरनाक हुन्छ भन्नेबारे शोधकर्ता तथा विशेषज्ञहरुले अनुसन्धान सुरु गरेका छन्।
भेरियन्टको नाम ‘डेल्टाक्रोन’ किन?
साइप्रस विश्वविद्यालयमा जीवन विज्ञानका प्राध्यापक र जीव अनुसन्धान तथा आणविक विषाणु विज्ञान प्रयोगशालाका प्रमुख लियोनडिओस कोस्त्रिकिसले ‘दुई भेरियन्टको मिश्रणको रुपमा’ पाइएको भाइरसको स्वरुपको नयाँ कोभिड–१९ भेरियन्टलाई ‘डेल्टाक्रोन’ नाम दिएका थिए। कोस्त्रिकिसले अहिले ओमिक्रोन र डेल्टा दुवै संक्रमण रहेको र अहिले नै दुवै भेरियन्ट मिलेर बनेको नयाँ भेरियन्ट भेटिएको दाबी गरेका थिए।
उनकाअनुसार डेल्टा भाइरसको जिनोमभित्र ओमिक्रोनको अनुवांशिक विशेषता र संरचना भएकाले भाइरसको यो स्वरुपलाई ‘डेल्टाक्रोन’ नाम दिइएकोे थियो। योसँगै भाइरसको नयाँ स्वरुपमा ओमिक्रोनमा केही म्युटेशन पनि पाइएको थियो।
कोस्त्रिकिस र उनको समूहले गरेको सांख्यिकीय विश्लेषणमा कुल २५ जनामा भाइरसको यो नयाँ स्वरुप पाएका थिए। जसमध्ये ११ जना अस्पतालमा भर्ना भएका थिए भने १४ जना समूदायमा थिए। अस्पतालमा भर्ना भएकाहरुमा यो भेरियन्टको विशेषता धेरै मात्रामा देखिएको थियो। साइप्रसमा फेला परेको कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरुपलाई ७ जनवरी मै जीआईएसएआईडीलाई पठाइएको थियो, जुन अन्तराष्ट्रिय रुपमा भाइरसमा हुने परिवर्तनको बारेमा तथ्यांक राख्ने संस्था हो।
‘डेल्टााक्रोन’ कोरोना भाइरसको वास्तविक भेरियन्ट हो वा प्रयोगशालामा भएको त्रुटि हो भन्ने चाहिँ पुष्टि भइसकेको छैन। न त यसको नाम नै आधिकारिक हो।
सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म यो भेरियन्टबारे देखिएको चर्चापछि चिकित्सक तथा विशेषज्ञहरूले अनुसन्धान थालेका थिए। बेलायतको ‘वेल्लकम सेन्गर इन्सचिच्युट’मा कोभिड–१९ ‘जेनामिक्स इनिसिएटिभ’का प्रमुख रहेका डा. जेफ्फरी ब्यारेटाका अनुसार भाइरसको यो किसिमको नयाँ स्वरुप प्रयोगशालाकै त्रुटि हुनपर्ने बताएका छन्। ‘यो जैविक रुपमा भएको डेल्टा र ओमिक्रोनको म्युटेसन होइन’, उनले भनेका छन्।
बेलायतकै ‘इम्पेरियल कलेज’का प्राध्यापक तथा भाइरोलोजिष्ट डा. टम पिककका अनुसार प्रयोगशालामा भएको त्रुटिलाई ठूला सञ्चारमाध्यमले ‘डेल्टाक्रोन’ भन्दै चर्चामा ल्याएको बताए। उनका अनुसार जस्तोसुकै प्रयोगशालामा पनि भाइरसको सिक्वेन्सिङ गर्दा मिश्रण हुने संभावना हुन्छ। त्यसैले प्रयोगशालाबाटै ‘डेल्टाक्रोन जन्मिएको’ उनको भनाइ छ।
अन्तराष्ट्रिय समुदायका वैज्ञानिक तथा चिकित्सकले भाइरसको यो स्वरुप नभएको र प्रयोगशालाको त्रुटि भएको बताइरहँदा साइप्रसका वैज्ञानिक डा. कोस्त्रिकिसले भने प्रतिवाद गरेका छन्। उनले भाइरसको यो स्वरूप थाहा पाउनलाई एउटा मात्रै नभएर थुप्रै प्रयोगशालामा सिक्वेन्सिङ गरिएको बताए।
यता साइप्रस मेलले साइप्रसभर सुरुवाती २५ सहित हालसम्म ५२ जना ‘डेल्टाक्रोन’ भेरियन्टका संक्रमित भेटिसकिएको उल्लेख गरेको छ।